Iindaba - u-Hebei Lubang Carbon Products Co, Ltd. wanikwa umthengisi ofanelekileyo weBaosteel Union Steel.
U-Hebei Lubang Carbon Products Co, Ltd. wanikwa umthengisi ofanelekileyo weBaosteel Union Steel.
I-HEBEI RUBANG CARBON IMVELISO CO., LTD yanikezela ukuxhaswa okufanelekileyo kwe-baogang i-iron edibeneyo ngenxa yokusebenzisana okungcono kunye nomgangatho olungileyo we-graphite electrode ngo-matshi, 2020.
Iqela leBaogang elasekwa ngonyaka we-1954, sisiseko esikhulu semveliso yentsimbi e-china kunye nesiseko esikhulu semveliso esinqabileyo emhlabeni. ineenkampani ezimbini ezidwelisiweyo, ngaphakathi mongolia baotou umanyano yentsimbi co., ltd kunye nomongolia wangaphakathi baotou intsimbi enqabileyo-umhlaba co-tech co., ltd, enexabiso elipheleleyo lee-yuan ezingaphezu kwe-160 yezigidigidi (i-24.11 yezigidigidi zeedola) ngo-2015.
Iqela leBaogang libekwe kwisithili semigodi se-bayan obo, apho iintlobo ezili-175 zeeminerali kunye neentlobo zezinto ezingama-71 zifunyenwe. Ngaphezu, isithili sesona sinomhlaba sinqabileyo sinqabileyo kwaye sesibini ngobukhulu sigcini se-niobium kwihlabathi liphela.
Iqela leBaogang liyazibandakanya kumashishini esinyithi, umhlaba onqabileyo, izimbiwa, kunye namanye amashishini angekho ngentsimbi, anje ngezixhobo zokuvelisa, ulwakhiwo lobunjineli kunye nokutya okuphilayo. ibeke amasebe kumaphondo ali-13 kunye nee-ofisi ezininzi e-United States naseMongolia.
Iqela leBaogang likummandla ozimeleyo we-mongolia ozimeleyo, odibana nenxalenye esemantla kunye nenxalenye yomntla-ntshona we-china, emelene ne-mongolia ne-russia. inezibonelelo zomhlaba, amalahle, i-iron, amanzi kunye nezixhobo zombane.
Ngaphantsi kobudlelwane obungcono kunye ne-baogang yensimbi, hebei rubang carbon rpoducts co., Ltd. Ukuqhubeka nokubonelela ngeprodcust elungileyo kunye nokunikezela ngeenkonzo ezinomtsalane ngakumbi kwabanye abathengi bentsimbi basekhaya e-china nakwamanye amazwe nakwizizwe ngezizwe iipillipines, malaysia, taiwan, turkey, ploland, Russia, spain, uae., argentia, india, italy ,; izityalo zentsimbi yasekhaya ezinje nge: rizhao yentsimbi ebambe iqela co., ltd., iChina intsimbi yokuhlangana, fujian sangang (group) co., ltd., panzhihua intsimbi vanadium co., ltd., isebe le-laiwu yentsimbi kunye nentsimbi., ltd ye I-shandong yentsimbi kunye ne-steel gorup co., ltd.
Isiqinisekiso sokuxhasa ngokufanelekileyo sakhutshwa yi-baogang emanyeneyo nge-matshi 16, 2020 njengezantsi: